“Kulnka Manchester United waa dareen qaas ah, laakiin muuhimadeyda waa in Juventus ay guuleysato” _ Cristiano Ronaldo – Gool FM
Dajiye October 23, 2018
(Champions League) 23 Okt 2018. Cristiano Ronaldo ayaa xaqiijiyay sida uu u doonayo inuu guulo la gaaro kooxdiisa Juventus, wuxuuna hadalkiisan imaanayaa kahor kulanka ay caawa kula ciyaari doonaan Manchester United garoonka Old Trafford wareega 3-aad ee tartanka Champions League.
Ronaldo oo ku soo qaatay garoonka Old Trafford inta u dhaxeesay 2003 ilaa iyo 2008 ayaa shir jaraa’id uu kasoo muuqday wuxuu kaga hadlay kulanka uu kaga hor imaan doono kooxdiisii hore ee Manchester United.
“Hadii aan kulaan u ciyaarno si fiican sida uu doonayo macalinka, waxaan awoodnaa inaan guul gaarno, Juventus waa sida gurigeyga oo kale”.
“Kulankan waa hubaal inuu noqon doono mid dareen leh, laakiin muhiimadeyda waa in Juventus ay guul gaarto, dhinaca kale waa inaan ixtiraamnaa Manchester United, waa koox weyn, waxaana tababare u ah Jose Mourinho”.
Ronaldo, ayaa intaas kadib ka hadlay eedeymaha ah inuu kufsi u geestay haweeney ree Mareykan sanadii 2009, kdib markii kiiskan dib loo furay sanadan 2018, wuxuuna xaqiijiyay inuusan waxba galabsan.
“Aniga halkan uma joogo inaan been sheego, waxaan kalsooni ku qabaa qareenka ila shaqeeya, waxaan kasoo saarnay arintan war rasmi ah labo toddobaad kahor, sidaas darteed waxaan dareemayaa farxad”.
Cristiano ayaa wuxuu hadalkiisa kusoo xiray kadib markii wax laga weydiiyay inuu ka careesan yahay inaan la gudoon siinin abaal marinta FIFA ee xidiga ugu fiican aduunka, isla markaana uusan kasoo qeyb galin xaflada “Ma xiiseenayo abaal marinada shaqsiyadeed”.